Antso sy ambony: inona no maha samy ao amin'ny fanomanana ny fitoriana - Ny mpisolovava rehetra ao Japana an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera ny Uponese mpisolovava.
Ny mpisolovava rehetra ao Japana an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera ny Uponese mpisolovava.
Inona no maha samy hafa azy ireo
Olom-pirenena miaro ny zon'olombelona, ary koa ny mpisolovava matetika maheno toy izany dia tsy toy ny antso sy ny ambonyAntso no ohatra faharoa ny pitsarana. Raha vao jerena, ny zava-drehetra lasa mazava, fa misy fahasamihafana lehibe tokoa eo amin'izy ireo. Noho izany, andeha isika handinika amin'ny an-tsipiriany inona no antso sy ambony, inona no maha samy hafa azy ireo: Ambony sy ny fampakarana, inona no maha samy hafa ny argumentation ny fitarainana. Maro ny mbola tsy nahita fiainana ny mpisolovava, ary na dia tsy vonona ny olom-pirenena, tsy tena mahatakatra ny fototry ny fiovana. Taorian'ny antso, fotsiny izy ireo mamerina manoratra ny 'cap' ny ny fitarainana sy hanaiky izany ny manaraka ny ohatra. Na izany aza, io dia ny fahadisoana. Ny antso, araka ny efa ny voalaza etsy ambony, dia mihevitra ny raharaha eo amin'ny fahamendrehana. Izany eto fa izany no ilaina mba hanaporofoana fa ny olom-pirenena marina, dia mifototra amin'ny fenitra amin'ny lalàna, porofo, ny fijoroana ho vavolombelon ireo vavolombelona. Ny ambony ireo tohan-kevitra tsy midika na inona na inona. Ny fahatelo ohatra dia ny fenitra sy ny fomba fanatanterahana ny mikasika ny lalàna tokony ho hita. Inona no hevitry ny hoe Andeha isika handinika amin'ny an-tsipiriany isika Rehefa voalaza etsy ambony, amin'ny ambony dia ilaina ny milaza ny fenitra izay nandika nandritra ny fotoam-pitsarana azy.
Izahay dia miezaka ny hamaly izany fanontaniana izany
Ohatra, mety hisy ny manaraka ny fandikan-dalàna ny fomba fanatanterahana ny fitsipika: ny maha samy hafa Ny ambony sy ny fitsarana ambony fa ilay teo aloha dia ny tsy hihevitra mihitsy aza ny fitarainana raha toa ka tsy maneho ny ambony fandikan-dalàna eo amin'ny fitarainana, ao kosa ny antso, izay mandinika ny raharaha mikasika ny fahamendrehan. Ho toy ny ohatra, isika simulate ny manaraka ny toe-draharaha. Noho ny tsy hanaiky vaovao ho an'ny hetra momba ny fanaraha-maso, ny sazy ampiharina araka ny andinin-tsoratra roa ny Andininy faha- ny Hetra Fehezan-dalàna. Na izany aza, ity fitsipika ity dia tsy tokony ho ampiharina ny olon-tsotra mpandoa hetra. Noho izany, misy ny fampiharana ny lalàna izay tsy mitaky fampiharana.
Izany dia tokony ho hita ho toy ny fandresen-dahatra ao amin'ny fitsarana ambony.
Noho izany, ny antso sy ny ambony, inona no maha samy hafa ankoatra ny zavatra izay efa voatanisa. Ao ny lamin ny fandinihana. Isika dia miresaka momba izany bebe kokoa. Ankoatra ny voalaza etsy ambony ny fahasamihafana, izay nametraka fitarainana tany. Antso no atolotra ny voalohany, ohatra, izay atao ny fanapahan-kevitra. Izany dia mety ho fitsaram Izany no izy izay, rehefa avy nametraka fitarainana, manomana ny raharaha fitaovana sy ny mandefa ny azy ireo 'ambony,'. Ambony dia nanompo mivantana. Miaraka izany dia ilaina ny hametraka ny dika mitovy ny fanapahan-kevitra voalohany roa ohatra. Izany no zava-dehibe fa ny tahirin-kevitra rehetra dia araka ny tokony ho fanamarinana ara-panjakana: tsy ilaina ny tombo-kase, ny sonia, ny lambam-pandriana dia voaisa, stitched, voaisy tombo-kase. Ny fitarainana mandeha amin'ny alalan'ny dingana telo: noho Izany, manantena izahay fa efa mazava nanazava inona ny maha samy hafa ny antso sy ny antso. Ny zava-dehibe indrindra - mba hiaro ny zon'izy ireo, raha izy ireo no voahitsakitsaka. Izany no adala miantehitra amin'ny insuperable toe-javatra, raha misy olona manao na inona na inona ny tenany.
Жапония Жариялылық Құқықтарын Қорғау Ұйымының
© 2021 Ny mpisolovava rehetra ao Japana an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera ny Uponese mpisolovava.